Imfundo yeSondlo-iBhanki yokutya yaseGalveston County
Amahlakani eGalveston County Food Bank kunye nemibutho kuluntu lwethu lonke ukunceda ukuxhobisa iintsapho zethu ngezixhobo abazifunayo ukupheka ukutya okunesondlo, okufanelekileyo, nokukhuselekileyo.
Cwangcisa iklasi yeMfundo yeZondlo
Intsebenziswano esempilweni yePatry
Iprojekthi ye-Healy Corner Store
Fumana iibhloko, jonga izixhobo, yabelana ngeendlela zokupheka kunye nokunye ngokusebenzisa le app yoyikekayo yokutya eMelika
UMququzeleli weMfundo yeSondlo
Iinkqubo zePatry esempilweni
UAle Mera MS
Iinkqubo zeNdlala eziDala
Cofa ufunde ngakumbi nakwezinye iiresiphi ukuvula iiresiphi kunye nenyaniso.
Amanqatha eBean Peanut
Ipeanut Butter Muffins i-muffin tinmixing isitya 1 1/4 indebe ibhotolo yamandongomane 1 1/4 indebe yomgubo wonke -3 / 4 yekomityi oats ojiweyo3 / 4 indebe iswekile emdaka 1 tbsp ukubhaka umgubo, i-oats, iswekile emdaka, umgubo wokubhaka, kunye netyuwa ekuxubeni isitya Betha ubisi, amaqanda, ibhotolo yamandongomani ndawonye ...
Qhubekeka ukufunda Amanqatha eBean Peanut
I-Veggie Tacos 1 ineembotyi ezimnyama ezinesoda 1 inombona opheleleyo we-kernel (akukho shukela yongezwa) 1 intsimbi ipepile 1 iavokhado yonke (ngokuzithandela) 1/2 i-anyanisi ebomvu 1/4 yekomityi yelamuni yejusi iimbotyi ezimnyama kwaye uhlambe. Ukucoca umbona. Xuba ndawonye kwisitya esikhulu sokuxubaChola intsimbi yepepile…
Qhubekeka ukufunda Veggie Tacos
Isaladi yeSpinatshi yespinatshi
Isaladi yeSpinatshi yespinatshi 6 iikomityi zesipinatshi esitsha2 iikomityi zerubber (ezisikiweyo) 1/2 indebe nut okanye imbewu ekhethiweyo indebe yebhalsamic ityuwa Ityuwa nepepile ukungcamla Hlamba ispinatshi esitsha kwaye ubeke kwisitya esikhuluSika iqunube
Qhubekeka ukufunda Isaladi yeSpinatshi yespinatshi
Isaladi yePasto yenkukhu
I-Pesto Chicken Pasta Isaladi imbiza yokupheka i-1 inkukhu emanzini 1 2/1 anyanisi 2/1 indebe ye-pesto isosi 1 indebe etyiweyo itamatato okanye itumato yecherry 4/1 indebe yeoyile yomnquma XNUMX iplag oyikhethile (ispaghetti, imacaroni, iqhina lokugoba) itshizi yeParmesan yokuhombisa ipasta ngok ukupakisha kwaye ubeke kwisitya esikhuluChopha iitumato kunye netswele ngelixa ipasta iphekaFaka inkukhu,…
Qhubekeka ukufunda Isaladi yePasto yenkukhu
IiBlogs zezeMfundo ngeZondlo
Igama lam ndingu-Abby Zarate, kwaye ndiyiDyunivesithi yaseTexas yeSebe lezoNyango (UTMB) i-dietetic intern. Ndize kwiGalveston Country Food Bank ukuze ndijikelezise uluntu. Ukujikeleza kwam kwakukwiiveki ezine ngoMatshi nangoAprili. Ngexesha lam ndiya kusebenza kwiinkqubo ezahlukeneyo zemfundo nezongezelelweyo. Ndisebenzise i…
Qhubekeka ukufunda Ibhlog yangaphakathi: Abby Zarate
Mholo! Igama lam ndingu-Allison, kwaye ndingumfundi we-dietetic ovela kwiDyunivesithi yaseHouston. Ndibe nethuba elimangalisayo lokufundela umsebenzi eGalveston County Food Bank. Ixesha lam kwi-Galveston County Food Bank indivezele kwiindidi ngeendidi zoxanduva kunye neendima abafundisi bezondlo ezithatha kuluntu, kubandakanywa ...
Qhubekeka ukufunda Iblogi yeDietetic Intern
Umsebenzisi: Trang Nguyen
Igama lam ndinguTrang Nguyen kwaye ndingu-UTMB i-dietetic intern ejikeleza kwi-Galveston County Food Bank (GCFB). Ndivalelwe e-GCFB iiveki ezine ukusuka ngo-Okthobha ukuya kuNovemba ka-2020, kwaye ngoku ndibuya emva kwexesha elingaphezu konyaka kangangeeveki ezimbini ezingakumbi ngoNovemba ka-2021. Ndiyawubona ngokupheleleyo umahluko phakathi…
Qhubekeka ukufunda Umsebenzisi: Trang Nguyen
Ibhlog yangaphakathi: Nicole
Molweni nonke! Igama lam ndinguNicole kwaye ndingumfundi we-dietetic wangoku kwi-Galveston County Food Bank. Phambi kokuba ndiqale ukujikelezisa apha, bendicinga ukuba konke esikwenzayo kwisebe lezondlo ziiklasi zokufundisa ngezondlo. Ndenze imisebenzi embalwa endicinga ukuba iya kubandakanyeka kwisikolo samabanga aphantsi ...
Qhubekeka ukufunda Ibhlog yangaphakathi: Nicole
Iibhlog zangaphakathi: IBiyun Qu
Igama lam ndinguBiyun Qu, kwaye ndingumfundi osafundayo ojikelezayo kwiGalveston County Food Bank. Kwibhanki yokutya, sineeprojekthi ezahlukeneyo esele zisebenza, kwaye unokuza nezimvo ezintsha kwaye uziphumeze! Ngelixa ndisebenza apha iiveki ezine, bendincedisa…
Qhubekeka ukufunda Iibhlog zangaphakathi: IBiyun Qu
Yintoni “ukutya okuHleliweyo”?
Igama "ukutya okucutshungulwayo" kuphoswa phantse kuwo onke amanqaku ezempilo kunye nebhlog yokutya onokuyifumana. Akuxoki ukuba uninzi lokutya okufumaneka kwiivenkile zokutya namhlanje kukuqhubekeka kokutya. Kodwa zintoni ezo? Sazi njani ukuba zeziphi ezifanelekileyo zokuzisebenzisa kwaye zeziphi ezingenampilo? Nantsi i…
Qhubekeka ukufunda Yintoni “ukutya okuHleliweyo”?
Imigaqo yeMpilo yaBantu abaDala
Sijolise kakhulu kwezempilo yabantwana kodwa akusoloko kukho intetho eyoneleyo ejikeleze impilo yabadala. Esi sihloko sibaluleke njengezempilo zabantwana. Ngokufanelekileyo sifuna ukugxila kwezempilo kuwo onke amaxesha obomi bethu kodwa abona bantu basesichengeni sokungondleki ngabantwana kunye nabantu abadala. …
Qhubekeka ukufunda Imigaqo yeMpilo yaBantu abaDala
Isikhokelo seMpilo yaBantwana
Ukuba uziva ucelomngeni ngokucinga ngokutya okusempilweni komntwana wakho, awuwedwa. Eli linqaku loxinzelelo kubazali abaninzi kodwa masilithathe eli nyathelo ngenyathelo! Ungaqala ngenyathelo elinye kwicala elifanelekileyo kwaye ukuba kuko konke okusebenzayo kusapho lwakho awuyi…
Qhubekeka ukufunda Isikhokelo seMpilo yaBantwana
Ukutya ngokusempilweni ekuHambeni Esinye sezikhalazo eziphambili esiva kusenziwa kukutya kukuba akusempilweni; oko kunokuba yinyani, kodwa kukho ukhetho olusempilweni apho! Ukuba uphumile ngaphandle kokutya okutyiwa kwangaphambili, kukho ezinye iindlela ezilungileyo ngaphandle kwesaladi. Ezi zilula…
Qhubekeka ukufunda Ukutya okusempilweni ekuhambeni
Ukufumana uninzi lweMveliso yakho kwiNtwasahlobo
Intwasahlobo isemoyeni, kwaye uyazi ukuba kuthetha ntoni oko, iziqhamo kunye nemifuno! Ukuba uhlahlo lwabiwo-mali, ngoku lixesha lokuthenga iimveliso zonyaka. Ungaqaphela ukuba ezi zinto zivelisayo zitshiphu ngexesha lasentwasahlobo: amaqunube, amaqunube amnyama, iiblueberries, iipesika kunye neplam; iitumato, umbona, iletesi, isikwashi, iminqathe nokunye! Apha …
Qhubekeka ukufunda Ukufumana uninzi lweMveliso yakho kwiNtwasahlobo
Ukuthenga "okusempilweni" kuhlahlo-lwabiwo mali lwe-SNAP
Ngo-2017, i-USDA yaxela ukuba izinto ezimbini ezithengiweyo ngumsebenzisi we-SNAP ebhodini lubisi kunye neziselo. Ingxelo ikwabandakanya ukuba i-0.40 yeedola kuzo zonke iziqhamo, imifuno, isonka, ubisi kunye namaqanda. Enye i-0.40 yeedola yaya kwizidlo ezipakishiweyo, ukutya okuziinkozo, ubisi, irayisi kunye neembotyi. I $ 0.20 eseleyo iya kwiziselo ezinxilisayo,…
Qhubekeka ukufunda Ukuthenga "okusempilweni" kuhlahlo-lwabiwo mali lwe-SNAP
Sisebenzisana ne-UTMB kule veki kwaye sibhiyozela iveki yokungondleki. Yintoni kanye kanye ukungondleki? Ngokwe-World Health Organisation "ukungondleki kubhekisa kukusilela, ukugqitha okanye ukungalingani kwindlela ubani atya ngayo amandla kunye / okanye izondlo." Isenokuba kukungondleki okanye ukungondleki. Xa umntu ecinga ngokungondleki, bahlala becinga ngabantwana ababhityileyo, kodwa into esiyiyo…
Qhubekeka ukufunda IVeki yokungondleki
INyanga yeSondlo kuZwelonke
Ngomhla wenyanga kaZwelonke weSondlo kwaye sibhiyozela! Siyavuya xa ulapha! INyanga yeSizwe yeSondlo yinyanga ebekelwe bucala ukuba iphinde iphinde iphinde ikhunjulwe ukuba kutheni ukukhetha ukutya okusempilweni nokwenza indlela yokuphila ebaluleke kangaka kuthi. Siphila kwilizwe apho sikwazi ukuthenga khona impilo kunye nokutsha…
Qhubekeka ukufunda INyanga yeSondlo kuZwelonke
Okulungileyo, Okubi, Okubi kweSwekile
Lusuku lweValentines! Usuku olupakishwe ngeelekese kunye nezinto ezibhakiweyo, kunye nomnqweno wokukutya kwiintliziyo zakho! Ndiyathetha, kutheni? Ithengiswa njengeyona nto iya kusenza sizive simnandi kwaye ilungile kuthi, kodwa kunjalo? Masingene nzulu kancinci size sibone ukuba zithini iimpahla…
Qhubekeka ukufunda Okulungileyo, Okubi, Okubi kweSwekile
Isondlo kuhlahlo-lwabiwo mali
Isondlo esifanelekileyo yinxalenye ebalulekileyo yokuba nobomi obusempilweni nobonwabisayo. Isondlo esifanelekileyo sikunceda ukuba ube nomzimba ophilileyo, othi wona ukwazi ukuwenza: usebenze yonke imihla, udlale nabantwana bakho ngakumbi, wenze imithambo kwaye ulale ngcono. Isondlo esifanelekileyo siqala ngesiseko esiqinileyo ekutyeni kwakho. Kunzima uku…
Qhubekeka ukufunda Isondlo kuhlahlo-lwabiwo mali
Eyona nto ibeka indawo yethu ngaphandle ngabantu bayo: banesisa, banobubele, kwaye bahlala bekulungele ukunceda abamelwane babo. Sisizathu sokuba sithande ukuhlala apha. Ngelishwa uninzi lwabamelwane bethu apha eGalveston bayasokola ukufumana ukutya okwaneleyo bona neentsapho zabo. Kwibhanki yokutya yaseGalveston County, injongo yethu kukubonelela ngokubaluleka…
Qhubekeka ukufunda Sinethamsanqa ukubiza iGalveston County Home
Isondlo kuLwimi lwam
Iividiyo zeMira en español: